Baarlamaanka Puntland oo wada mooshin lagu burinayo Heshiiska DP World | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Baarlamaanka Puntland oo wada mooshin lagu burinayo Heshiiska DP World
Baarlamaanka Puntland oo wada mooshin lagu burinayo Heshiiska DP World
written by warsan radio 26/11/2021
Wararka laga helayo Magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland ayaa sheegaya in qaar kamid ah Xildhibaannada Golaha Wakiilada Maamulkaasi Puntland ay wadaan olole mooshin la doonayo in lagu baabi’iyo Heshiiskii Shirkadda DP World iyo Xukuumadda ee ku saabsan Dekadda Boosaaso.
In ka badan 41 mudane ayaa waxaa la sheegay inay wadaan mooshinkaas, si meesha looga saaro heehiiska DP World sida ay xaqiijiyeen dad lagu kalsoonaan karo.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in 41 mudane ay mooshinka oo ah mid xoogan u gudbiyaan Guddoonka Golaha Wakiilada Puntland, iyada oo la sheegayo in ka hortegida mooshinkaan aysan waxba ka qaban karin Xukuumadda & Guddoonka Golaha Wakiilada Puntland intaba.
Sanadkii 2017-kii ayay heshiiska ballaarinta dekadda Magaalada Boosaaso wada galeen Xukuumaddii Cabduweli Maxamed Cali Gaas & Shirkadda DP World, waxaana la sheegay in Shirkaddu aysan weli waxba ku kordhin dekadda, sida uu hoob fagaaro ah ka sheegay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi.
Baarlamaanka Puntland oo wada mooshin lagu burinayo Heshiiska DP World was last modified: November 26th, 2021 by warsan radio
WHO oo ka digtay in qaarada Africa ay 100 kun oo qof ugu dhiman karaan COVID-19
Doorashada Aqalka Sare ee Galmudug oo la soo gabo gabeeyay
Dhageyso:-ku celiska Barnaamijka Barashada Beeraha
Madaxweyne lafta gareen oo ku baaqay in laga shaqeeyo midnimada ummadda
Ra’isul Wasaare Rooble oo ka Qeybgalay Kulanla Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay Ee Arimaha Soomaaliya